नागरिक लगानी कोषको नाफामा १२ % वृद्धि
२०७७ असार, १६
असार १६, काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण मंगलवार सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त विवरण अनुसार कोषको नाफामा गत वर्षको तुलनामा १२ प्रतिशत बढी खुद नाफा भएको छ । गत वर्ष तेस्रो त्रैमाससम्म रू. ३३ करोड ७७ लाख खुद नाफा गरेको कोषले यस वर्ष सोहि अवधिसम्ममा रू. ३७ करोड ९४ लाख खुद नाफा गरेको हो ।
यस वर्ष कोषको कुल आम्दानी रू.७ करोड ८५ लाख भएको छ भने कुल खर्च रू.२० करोड २६ लाख भएको छ । कुल आम्दानी गत वर्षभन्दा २१ प्रतिशत बढी र खर्च ३४ प्रतिशत बढी भएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७४/ ७५ को मुनाफाबाट २२ प्रतिशत बोनस वितरण गरि कोषले चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ३४ करोड ४८ लाख पुर्‍याएको छ ।
कोषको जगेडाकोष रकम गत वर्षभन्दा ४२ प्रतिशत बढी रू. ७ अर्ब २४ करोड ६८ लाख कायम भएको छ । गत वर्ष यस अवधिसम्म कोषको जगेडा कोषमा रू. ५ अर्ब ८ करोड ८५ लाख थियो । कोषको मुद्दती निक्षेप गत वर्षभन्दा यस वर्ष ११ प्रतिशत बढी रू. ८५ अर्ब १४ करोड छ ।
कोषले विभिन्न कम्पनीको शेयरमा रू. १० अर्ब १९ करोड ९४ लाख बराबर लगानी गरेको छ । यो लगानी गत वर्षभन्दा साढे ६७ प्रतिशत बढी भएको हो । धितोपत्र बजारमा आगामी साउनदेखि सहायक कम्पनी मार्फत स्टक डिलरको काम गर्ने तयारी गरेको कोषले धितोपत्रमा लगानी बढाएको छ । प्रतिशेयर आम्दानी रू. ३१ रहेको कोषको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २०८ रहेको छ ।
कोषले गत आवको मुनाफाबाट २२ प्रतिशत बोनस सहित १ दशमलव १६ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्तावसहित विविध प्रस्ताव पारित गर्न असार २० गते वार्षिक साधारण सभा गर्दैछ ।
यस वर्ष कोषले बोनस पश्चात कायम चुक्तापूँजीको आधारमा ८२ दशमलव ८४ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव समेत गरेको छ ।
उक्त सभा र लाभांश प्रयोजनका लागि कोषले असार १० गतेनै बुक क्लोज गरेको छ । कोषको हकप्रद प्रति आकर्षित भई धितोपत्र बजारमा कम्पनीको शेयरमूल्यमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
मंगलवार नागरिक लगानी कोषको शेयरमूल्य सबैभन्दा बढी रू. २०७ ले बढेको छ । यस दिन १० प्रतिशतले कम्पनीको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो ।मंगलवारको कारोबारपछि कोषको अन्तिम शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. २ हजार २७७ कायम भएको छ ।
प्याकिङ मेटेरियल आयातमा महसुल धरौटीको सहुलियत हटाउन माग[२०७७ असार, ३०]
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघद्वारा बजार बन्द[२०७७ असार, ३०]
प्रभु र समृद्धि क्यापिटलले शुरू गरे एकीकृत कारोबार[२०७७ असार, ३०]
साधना लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँट, ६६ हजार १५२ जनालाई १० कित्ता [२०७७ असार, २९]
प्रदेश नं २ सरकारको बजेट बहुमतले पारित[२०७७ असार, २९]
नेप्से १३४२.४० विन्दुमा, ५ ओटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट ब्रेक[२०७७ असार, २९]
नेप्से ४ अंक घट्यो, १३३५ .५६ विन्दुमा (२ बजेको अपडेट) [२०७७ असार, २९]
ग्रामीण विकास लघुवित्तमा ४ जना सञ्चालक चयन[२०७७ असार, २९]
हिमालयन बैंकको शेयर रजिष्ट्रारमा हिमालयन क्यापिटल नियुक्त[२०७७ असार, २९]
तथ्यांकोवाच : लयमा फर्किन थाल्यो सेम्पुको आयात
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का लागि रु. ३० करोड खर्च
लकडाउन खुकुलो भएपछि निर्जीवन बीमा व्यवसायमा सुधार आउँदै
चल्न थाले सार्वजनिक यातायात
बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स तत्काल प्रक्रिया अघि नबढ्ने